Ixabiso eliphantsi le-Semi-wet Material Crushing Machine yabavelisi be-Organic Fertilizer kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- Isichumisi se-Organic se-Semi-wet Sisebenzisa iCrusher Unesibonelelo sokufuma ngokubanzi ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-25 -55% zezinto eziphilayo ezinesonka. Lo matshini usombulule ingxaki yokutyunyuzwa kwezinto eziphilayo ezinomswakama ophezulu, inesiphumo sokutyumka kwizixhobo zemvelo emva kokuvumba.
Yintoni i-Semi-wet Material Crushing Machine?
Inkqubo ye- Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine sisixhobo sokutyumza ngobuchwephesha bezinto ezinomswakama ophezulu kunye neefayibha ezininzi. Inkqubo ye-Ephakamileyo M.oisture Isichumisi esityunyuzwa matshini isebenzisa ii-rotors zenqanaba-mabini, oko kuthetha ukuba inyukile kwaye yehla amanqanaba amabini otyumkileyo. Xa izinto ekrwada zondliwa ngevoti ephezulu yenqanaba lokusila okurhabaxa, emva koko ihanjiswe kwisigaba esisezantsi ukuze iqhubeke nokuguba ibe ngumgubo ocolekileyo ukufikelela kubungakanani beyona nto ilungileyo kwinkqubo elandelayo yegranulating. Akukho mesh yesisefo emazantsi Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine. Ke izinto ezimanzi zinokutyunyuzwa zingaze zivalwe. Kwanezinto ezisandula ukukhutshwa emanzini zinokutyunyuzwa, kwaye ungakhathazeki malunga nokuvaleka okanye ukuvalwa. Inkqubo ye- Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine Isetyenziswa ikakhulu kwimveliso nasekuqhubekisweni kwesichumiso esinezinto eziphilayo, inefuthe elilungileyo kwizixhobo ezinje ngomgquba wenkukhu kunye ne-humic acid.
Usetyenziselwa ntoni umatshini wokuSityumza oSetyenzisiweyo?
Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine Isetyenziselwa ukucola ukuvundiswa komgquba wezinto eziphilayo, ukuchumisa inkunkuma yasekhaya edolophini, udaka lwekhabhoni yengca, inkunkuma yasemaphandleni, inkunkuma yemizi-mveliso yendiza, ukufuya imfuyo kunye nomgquba weenkukhu njalo njalo.
Uphawu Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine
1.Ivolor yefayile ye Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine Ulwakhiwo lusebenzisa uyilo olusengqiqweni kunye nolwakhiwo. Ngamabala amabini enqanawa, ukusebenza kwawo ngokutyunyuzwa kuphindwe kabini kunabanye oomatshini abatyumkileyo. Izinto zingena kwinxalenye etyumkileyo ukusuka emngxunyeni wokondla, emva koko zityunyuzwe zibe ngumgubo ocolekileyo.
2.Isebenzisa izando ezinxibe nzima. Amacwecwe esando ayenzelwe ukuthembisa ukuba bomelele kwaye banxibe nzima ngokwaneleyo ukuze bandise ubomi benkonzo.
3.Ukuxhonywa kwale grinder yesichumiso kudityaniswe ngeplanga lesinyithi lekhabhoni kunye nentsimbi yebhokisi. Iyadlula kwimveliso engqongqo yokuqinisekiswa kwemveliso kunye neemfuno ezithile zetekhnoloji.
4.I Semi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine ukuthengiswa kunamaleko amabini eenkqubo zokugaya ukutyumza izixhobo ngokugqibeleleyo kunye nokufumana ukusebenza ngokukuko.
5.Adopting bhetyebhetye drive ibhanti. Imoto yombane iqhuba ibhanti yokuhambisa ibhanti ehambisa amandla kwi-axis yenqununu, iyenza ijikeleze ngesantya esiphezulu ukutyumza izixhobo.
Izinto eziluncedo zeSemi-emanzi Material Ukutyunyuzwa Machine
1) Ukusetyenziswa okubanzi kunye nokuthembeka okuphezulu. Lo matshini awunazantsi kunye nescreen, ke ngaphezulu kwe-100 iintlobo zezinto ezinokutyunyuzwa kwaye umatshini awusoze wavalwa.
2) ulondolozo olulula. Lo matshini wamkela itekhnoloji yeendlela ezimbini. Ukuba isando sinxityiwe, isando singaphinda sisetyenziswe emva kokuhambisa indawo.
3) ukusebenza Good otyumkileyo. Lo matshini usebenzisa zigaba-mbini ivolontiweyo yentsimbi, kwaye izinto kuqala lityunyuzwa libe ngamaqhekeza amancinci lize lityunyuzwe luthuli olucolekileyo.
4) Umsebenzi wokonga abasebenzi, kwaye umsebenzi ulula. Isebenzisa ubuchwephesha obuphezulu, ngumntu omnye kuphela onokusebenza ngokulula, ayikhuselekanga kwaye ithembekile kuphela, kodwa ikwalungiselela nolondolozo.
Iimveliso ezimanzi ezimanzi ezityumza iMiboniso yeVidiyo
Iimveliso ezimanzi ezimanzi ezityumkileyo zoKhetho loMatshini
Particle Ubungakanani (mm)
Ubungakanani beSando esifutshane
130x50x5 = iziqwenga ezingama-70
130x50x5 = iziqwenga ezingama-24
180x50x5 = 32 iziqwenga
300x50x5 = iziqwenga ezingama-72
Ubungakanani bexesha elide
180x50x5 = iziqwenga ezingama-36
240x50x5 = iziqwenga ezingama-48
350x50x5 = iziqwenga ezingama-48
Ubude × ububanzi x ukuphakama
I-1500 × 1300 × 1290
Egqithileyo I-Screw Double Extruding Granulator
Okulandelayo: Nkqo Chain isichumiso isityumzi Machine
Intshayelelo Yintoni i-Straw & Wood Crusher? I-Straw & Wood Crusher ngesiseko sokufunxa izibonelelo zezinye iintlobo ezininzi zesityumzi kunye nokongeza umsebenzi omtsha wokusika idiski, iyenza isebenzise ngokupheleleyo imigaqo yokutyumza kwaye idibanise itekhnoloji yokutyumza ukubetha, ukusika, ukungqubana kunye nokuguba. ...